केपी ओली गणितमा कमजोर, तर कागको कुरो बुझ्ने ! – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १३:०६
नेपालीमा एउटा गीत छ– ‘यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ ।’ संसदमा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफले यही गीतलाई सम्झायो ।
भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कागले चारो खानेबेलामा के सोच्छ भन्नेसमेत सुनाए । तर, गणितमा भने आफू अलि कमजोर रहेको उनले स्वीकारे । विदेशबाट कति नेपाली स्वदेश आउलान् भन्ने आकलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको गणित कमजोर देखिएको हो ।
सुरुको २२ मिनेट रोष्टममा उभिएरै बोलेका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यका कारण बस्ने कुर्सी माग गरे । प्रधानमन्त्रीले उभिन नसक्ने बताउँदा केहीबेर सांसदहरु भावविभोर देखिएका थिए । केही सांसदले प्रधानमन्त्रीको आत्मबलको प्रशंसा गरे भने केहीले स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरे ।
हालै भएको शल्यक्रियाका कारण लामो समय उभिन नमिल्ने बताउँदै बसेर सम्वोधन गरेका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुती निकै आक्रामक थियो । सरकारका कामको बचाउमा उनले निकै नै जोडबल गरे ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणको अन्त्यमा विपक्षी दललाई नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गरिदिन आग्रह गरे पनि विपक्षीले समर्थन नजनाएपछि बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो ।
कोरोना नियन्त्रणमा गतिलो काम गरेको दाबी
अधिकांश सांसदहरुको प्रश्न सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीका बारेमा केन्द्रित थिए । कोरोनाबाट आक्रान्तहरुलाई के प्याकेज ल्याइँदैछ भन्ने साझा प्रश्नहरु संसदबाट सरकारतिर तेर्सिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफचाहिँ घुमिफिरी उही लिपुलेक र कालापानीतिरै पुगिहाल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको चासो जनताका समस्यामा कमै देखियो ।
प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले राम्रो भूमिका खेलेको दाबी मात्रै गरेनन्, कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरुलाई पनि ‘कोरोनाले छोएको हुनाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार’ मृत्यु भएको भन्ने तर्क गरे । राष्ट्रियसभामा त अझ उनले कोरानाबाट मृत्यु भएको स्वीकार गर्नै अन्कनाएको सांसदहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कोरोनाले छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने पर्‍या छ । तर, त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा अनुसार हो । म भन्न चाहन्छु, अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन, नेपालले बेटर परफरमेन्स गर्‍या छ ।’
यति भनिसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना बढ्नुमा खुल्ला सीमानालाई दोष दिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने, ‘कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुल्ला सीमाना छ, जसरी मान्छेहरु लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै अवरोधको स्थिति छैन । यो फैलिइसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने ? फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो ।’
यसरी कोरोना र सीमानाको कुरा गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री ओली वीचैमा एकाएक विषयान्तर गरेर लिपुलेकतिर लागे । उनले कोरोनाबाट ट्विस्ट हुँदै भने, ‘अब एउटा कुराचाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन छापेका छौं अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौं, त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्यकपुस्तकहरुमा परिवर्तन ल्याउने छ । त्यसले हाम्रा लोगोहरुमा, अरु कुराहरुमा, थुप्रै कुराहरुमा परिवर्तन ल्याउँछ । तर, यो एउटा ऐतिहासिक काम हो । र, यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एकखालको परिवर्तन ल्याएको छ । र, ठोस कूटनीतिक पहलहरुद्वारा, एकदम सजिलो हुने छैन, जे लक्षण हामीले देखेका छौं, जस्तो मान्छेहरुले टिप्पणी गर्दैछन् । त्यसबाट हामीले देख्या छौं ।’
यति भनिसकेपछि उनी अझ अगाडि बढेर भारतको निशान चिन्हको व्याख्या गर्नतिर लागे ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने ‘भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने । अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह । चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीकचिन्ह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेख्या छ । सत्यमेव जयते भारतको चिन्हमुनि छ, विश्वास चैं म गर्छु ।’
प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते ? दुईटै लेख्या छ छन चैं । मास्तिर सिंह छन् चारमुखे, तल्तिर सत्यमेव जयते छ । त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौं, सत्यमेव जयते । त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं । किनभने, सत्यमेव जयते । अरु तपशीलका कुराहरु म पछि भन्नेछु ।’
….एकजना माननीयज्यूले प्रश्न उठाउनुभएको छ नक्साजस्तै जमिन फिर्ता लिन सजिलो छैन…. अवश्य सजिलो छैन । तर, नक्साले हाम्रो एउटा दृढतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
…एमसीसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निश्कर्ष आफूले निकाल्नुपर्‍यो । अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्‍यो, छलफल गर्‍यो । एमसीसी सम्झौता गर्‍यो । अविछिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्नेसमेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कतिपय ठाउँमा हाम्रा क्वारेन्टाइनहरु, हाम्रा गाउँहरु त्यो सहरमा जस्तो लागू हुँदैन । हाम्रो गाउँहरुको स्थिति अलिकति फरक पनि हुन सक्छ । तर, मुख्य कुराचाहिँ कोभिड १९ संक्रमण हुनबाट बचाउने कुराको प्रत्याभूति हो । त्यस प्रत्याभूतिलाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने….. माननीयले सुनकाण्डको मुद्दा किन सार्वजनिक भएन भन्नुभो….।’